DEG-DEG: Paulo Dybala Oo Ku Dhawaaqay In Isaga Iyo Saaxiibadiisa Laga Helay Caabuqa Coronavirus. - Gool24.Net
DEG-DEG: Paulo Dybala Oo Ku Dhawaaqay In Isaga Iyo Saaxiibadiisa Laga Helay Caabuqa Coronavirus.
Xidiga xulka qaranka Argentina iyo kooxda Juventus ee Paulo Dybala ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in isaga iyo saaxiibadiisaba laga helay caabuqa coronavirus wuxuuna sidaa ku noqday ciyaartoygii saddexaad ee kooxda Juventus ka tirsan oo coronavirus ku dhacay.
Daniele Rugani iyo Blaise Matuidi ayaa hore loo shaaciyay in ay qabaan caabuqa coronavirus laakiin hadda Paulo Dybala ayaa si rasmi ah u shaaciyay in isaga iyo saaxiibadiisa laga helay caabuqa corona virus.
Paulo Dybala ayaa bartiisa Instagram si rasmi ah ugu shaaciyay in isaga iyo saaxiibadiisa laga helay cudurka COVID-19 ee baryihii ugu danbeeyay dhibaatada wayn ku ahaa aduunka.
Paulo Dybala ayaa fariintan uu Instagram ku shaaciyay waxa uu ku bilaabay: “Qof kastowba, waxaan doonayaa in aan idiin xaqiijiyo idinka in aan helay natiijada tijaabadii COVID-19, aniga iyo Oriana waxaanu noqonay positive”.
Laakiin Pualo Dybala ayaa niyada u dajiyay taageerayaashiisa iyo kuwa kubbada cagta wuxuuna cadeeyay in ay xaalada fiican ku jiraan wuxuuna yidhi: “Nasiib wanaag, waxaanu ku jirnaa xaalad sax ah. Waad ku mahadsan tihiin fariimihiina”.
Qoraal ka soo baxay kooxda Juventus ayaa isna lagu cadeeyay in xidiga reer Argentina uu qaaday coronavirus waxaana qoraalka lagu yidhi: ““Paulo Dybala waxa uu maray baaritaan lagu ogaaday inuu qabo Coronavirus. Waxa uu karantiil ku jiiray gurigiisa tan iyo March 11. Xaaladiisa waa la sii qiimeyn doonaa, waana ay fiican tahay haatan.””.
Paulo Dybala ayaa sidaa ku ah ciyaartoygii saddexaad ee kooxda kowaad ee Juventus ka tirsan ee laga helay caabuqa coronavirus waxaana xanuunkani hore ugu dhacay difaaca Daniele Rugani iyo xidiga khadka dhexe ee Blaise Matuidi.
Caabuqa coronavirus ayaa qofka isku qarin kara muddo 14 maalmood ah, taas oo la micno ah in qofku uu laba todobaad isaga oo sida fayraskan aanu muujinayn wax calaamadaha guud ee xanuunkan lagu garto ah.